NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် "Bosch ရဲ့" (ဆောင်းပါး2၏ 3) ၏မျှော်နှင့်အသံ
Home » အသားပေး » "Bosch ရဲ့" (ဆောင်းပါး2၏ 3) ၏မျှော်နှင့်အသံ
"Bosch ရဲ့" (ဆောင်းပါး2၏ 3) ၏မျှော်နှင့်အသံ
ညအချိန်တွင် LA ကအပေါ်စီးကသူ့အိမျတျော၌ဟယ်ရီက Bosch ၏ပြီးပြည့်စုံသောသာဓကအဖြစ်တိတု Welliver Bosch ရဲ့'' s ကိုဂန္အဆိုးမြင်အန္တရာယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်။
ဒီစီးရီးအတွက်ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါးမိုက်ကယ် Connelly အားဖြင့် Bosch ရဲ့ဝတ္ထု Raymond Chandler နှင့် Dashiell Hammett များ၏အကြိုက်အားဖြင့်စုံလင်ခက်ခဲတဲ့, Hard-ပြုတ်အမေရိကန်စုံထောက်ဝတ္ထု၏အစဉ်အလာအပေါ်သယ်ဆောင်သကဲ့သို့, ဘယ်လိုဖုံးလွှမ်းအမေဇုံချုပ်ဗီဒီယိုရဲ့ဒါ Bosch ရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးဂန္အဆိုးမြင်အန္တရာယ်ရုပ်ရှင်၏မှောင်မိုက်, gritty ကြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအဆိုးမြင်အန္တရာယ်ခံစားသဘောပေါက်ဘို့အများဆုံးတာဝန်ရှိလူများနှစ်ခုမိုက်ကယ် McDonough စီးရီးအပေါ်သူကိုအခြားနှစ်ဦးစလုံး (ASC, B.Sc, AMPAS) နှင့်ပက်ထရစ် Cady (ASC) တွင်, ငါးရဲ့ DPS ရာသီဖြစ်ကြသည်။
အင်တာဗျူးခံရဖို့သဘောတူညီခဲ့တဲ့သူ McDonough, ဒါဝိဒ်သည် Mackenzie, ရိုဒရီဂို Garcia က, တာရိန်းစဒေးဗီးစ်, စတီဖင် Frears မိုက်ကယ် Radford နှင့်လောရင့် Kasdan ကဲ့သို့သော feature ကိုရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများအဘို့အရုပ်ရှင်ပညာလုပ်နေတာထွက်တော့တာပဲ။ သူလည်းအသိသာဆုံးသူ့ယခင် NYU အတန်းဖော် Debra Granik နှင့်အတူမျိုးစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ရှိခဲ့ပါတယ်ရဲ့ ဆောင်းရာသီရဲ့အရိုးလေးခံသော အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့် အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအပါအဝင်အဆိုပြုချက်။ ဖြည့်စွက်ကာ Bosch ရဲ့, McDonough လည်းများအတွက် DP ခဲ့ထားပြီး Downton Abbey နှင့် အဆိုပါလမ်းလျှောက်သေကိုကွောကျရှံ့.
McDonough သူချဉ်းကပ်ပုံကိုရှင်းပြခဲ့ Bosch ရဲ့'' s ကိုအဆိုးမြင်အန္တရာယ်လေထု။ ၏ "တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရှုထောင့် Bosch ရဲ့ ကျနော်တို့အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ထိုညဉ့်အချိန်တွင် LA ကခဲ့, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ "နောက်ကျောနဲ့တူရုပ်ရှင်သွားသောမြို့တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ခံစားရှိပါတယ် အပူ နှင့် ဆှေမြိုး လျင်မြန်စွာတစ်ခု LED streetlight Bland သို့ပြောင်းလဲနေတဲ့သောမြို့များ၏ဆိုဒီယမ်ညဥ့်အလင်းများအတွက်လွမ်းဆွတ်လိုဆန္ဒ။ ကျနော်တို့မျိုးစုံအရောင်အပူချိန်နှင့် LA ကညဥ့်ခံစားမှုနှင့်အတူကြွလာသည်ဟုနီယွန်၏အမျိုးမျိုး၏အသိကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်၏မှောင်မိုက်ထဲသို့အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် gritty ၏အသိမြှင့်တင်ရန်နိမ့်အလင်းအဆင့်ဆင့်မှာအလုပ်လုပ်အတူပါလာနိုငျသောဆူညံသံလက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်အဆိုပါမြို့လယ်ဧရိယာ၌ဂန္တည်နေရာကို အသုံးပြု. သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အဆိုးမြင်အန္တရာယ်မြို့သူမြို့သားသမိုင်းနှင့်ရာသီလေး၎င်း၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုမှာအများကြီးကြည့်ရှုကြ၏။ "
ရာသီငါးအဘို့, အဖွဲ့ကအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ "မနှစ်ကကျနော်တို့အထူးသဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည် ပြင်သစ်ကော်နက်ရှင် texture စပ်လျဉ်း၌၎င်း, ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက storyline နောက်ဆုံးရာသီနှင့်အတူသှားသောလေ့လာရေးနှင့်စောင့်ကြည့်၏အဓိပ္ပာယ် "McDonough ပြောတယ်။ "သင့်လျော်သောကြည့်အဆုံးအဖြတ်၌အကြှနျုပျတို့၏ရာသီဥတု Vane အဖြစ်ပြုမူသောအစောပိုင်း script များသဖြင့်အကြံပြုတဲ့အမြင်အာရုံချိတ်, အစဉ်အမြဲရှိပါသည်။
"ရာသီငါးခုတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦး Monstro အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူအနီရောင်လက်နက်မှအနီရောင်နဂါးမှ switched ။ ကျနော်တို့အခုအော်ပရေတာတချို့အပိုမြင်နိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုခွင့်ပြုထားတဲ့ 6K ထုတ်ယူဘို့ 5K shoot, ကြှနျုပျတို့ယခု 8 ကိုအသုံးပြုဖို့: 1 ချုံ့ကြောင့် post ကိုကျွန်တော်တစ်ဦး 5K ထုတ်ယူခြင်းနှင့်အတူ 4K မှာနဂါးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအဖြစ်တော်တော်များများတူညီ data တွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအဆုံးသတ်နိုင်အောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပေါ်-set ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနှစ်ခုသုံးပြီးပြု Sony က PVM254 25 "အိုအယ်လ်အီးဒီမော်နီတာ။ ကျနော်တို့7LUTs မှတက်ကိုင်နှင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူမှားအရောင်မော်နီတာအဖြစ်ပြုမူသောခလုတ်များနှင့် Odyssey 36Q Plus အားမော်နီတာ / အသံဖမျးသုံးပြီးမော်နီတာကြှနျုပျတို့၏အစု LUTs သက်ဆိုင်ပါသည်။
ကျမတို့ကလည်းဘယ်ပေးသောနေ့တှငျသုံးလေးသီးခြားနေရာများတွင်မကြာခဏဖြစ်သကဲ့သို့ "ကျနော်တို့ကအခုချိန်မှာ LED ကိုအများကြီးအသုံးပြုကျနော်တို့မျက်စိ-အလင်းတူသောတစ်ခုသို့မဟုတ်ပေါ်တွင်မဆို setup ကိုအပေါ်ရှယ်ယာ-အိပ်ရာကုန်တင်ကားများနှင့်နောက်ဆုံးထိသုံးပြီးမြို့ပတ်ပတ်လည် bounce အနီးကပ်-up, များသောအားဖြင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဘက်ထရီ powered LED ကိုယူနစ်နှင့်အတူအောင်မြင်နေကြသည်။ ညဥ့်အပြင်, ကြှနျုပျတို့ကိုမကြာခဏအလင်းရောင်တစ်ခွင်ပေါ်ကနေသို့မဟုတ် Condor ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားစက်မှုဇုန်လ်တာအတွက်အစစ်အမှန်ဆိုဒီယမ်မီးသီးကိုအသုံးပြုပါ။ အဖြစ်ကြောင့်ငါတို့သည်အချို့သောစက်မှုငွေ့သို့မဟုတ်စိမ်းပြာရောင်တို့ပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ, အဖြိုက်နက်နှင့် HMI ပုံမှန်ဂျယ်လ်ကဒ်ရောမွှေပါလိမ့်မယ်။ "
ငါသည်လည်းအောင်မြင်ရန် Post-ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အရောင်နိုင်တဲ့ coding များအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. McDonough ကိုမေးမြန်း Bosch ရဲ့'' မူထူးခြားတဲ့ကြည့်ပါ။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီရောင်အစိမ်းရိုက်ကူး-နီတစ်ခွင်အစအဆုံးအကုန် Log3g10-ဖြစ်ပါတယ် Warner Bros. Motion Picture Imaging မှာလုပ်ငန်းများ၌။ The Daily တစ်ခု MTI Cortex အပေါ်လွှဲပြောင်းနေကြသည်နှင့်အစုကနေ LUTs '၌ဖုတ်က' LUTs နဲ့ဖမ်းယူရေး 709 image ကိုဖန်တီးရန်လျှောက်ထားနေကြပါတယ်။ repo ဘို့ခွင့်ပြုပါရန်, ကင်မရာအော်ပရေတာဘေးကင်းလုံခြုံရေးဧရိယာများအတွက်ခွင့်ပြုပါရန်,6ချုံ့နှင့်ရိုက်ချက်ကယျြဝနျးမှလိုအပ်တဲ့အခါကျနော်တို့တပြင်လုံးကို 5K ပုံရိပ်ဧရိယာကိုအသုံးပြုဖို့: ကျနော်တို့ 8K ထုတ်ယူခြင်းနှင့် 1 မှာ 6K အတွက်မှတ်တမ်းတင်။ DNX 36 ဖိုင်တွေ LUTs နှင့်အတူအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဖန်တီးနေကြသည်ယရှေုသညျ Borrego နေဖြင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် Sync အသံ။
"Colorist ဖြစ်သူ Scott Klein တစ်ဦးလမ်းပြသောကြောင့်အစုံ LUTs သုံးပြီး pass ပါဘူး။ အဆိုပါ set ကို LUTs ပြီးခဲ့သည့်ငါးရာသီကျော်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ Scott နှင့်လက်ထောက် Ara Thomassian တစ်ဦးက Black မှော် Da Vinci ဖြေရှင်းရန်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ နှစ်ဦးကိုအပြီးသတ် 'passes တက်ရောက်သူများတွင်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Pieter ဇန်နဝါရီ Brugge နှင့် DPS ၏လည်းကောင်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်ပက်ထရစ် Cady ပြုနေကြသည်။ တဦးတည်း 'ချိန်ညှိခြင်းကိုကြည့်' 'ခံရခြင်းနှင့်အခြားဖြစ်ခြင်း' 'နောက်ဆုံးအရောင်။ ' ကျနော်တို့ UHD အတွက် SD က-Rec709 Prores422HQ အပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူ။ တစ်ဦး HDR ကို pass ကိုလည်းပြုမိ-Rec2020PQ-ကြီးကြပ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သူ Scott ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့၏ Bosch ရဲ့ ထုတ်လုပ်သူ, Mark ဒေါက်ဂလပ်, Post ကိုကြီးကြပ်ရေးမှူး Tayah Geist နှင့်ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဲရီကာ Shea ၏ post အဖွဲ့ superbly သောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စီမံကိန်းမန်နေဂျာမိုက်ကယ်ဟော်လန်အားဖြင့် Warner မှာထောက်ခံနေကြတယ်။ "
အများစု Bosch ရဲ့ soundstages ဆန့်ကျင်အဖြစ် (ကလွဲရင်၏ဝီရိယစိုက်စစ်မှန်အပန်းဖြေဖြစ်ခြင်းအမှန်တကယ်တည်နေရာပေါ်ရိုက်ကူးနေပါတယ် ဟောလိဝုဒ် အဓိကစီးရီးအတွက် featured ကြောင်းရဲစခန်း) ။ သို့သော်အခြားအရေးပါသည့်ရာသီတစ်စတူဒီယို set ကိုဟယ်ရီ Bosch ရဲ့အပိုင်း 8 နှစ်ခု perps နှင့်အတူအသေခံခြင်းတစ်ဦးရန်ပွဲရှိတယ်ဘယ်မှာသေးငယ်တဲ့လေယာဉ်ပျံများ၏အတွင်းပိုင်းလိုအပ်ကြောင်းငါးခုတည်နေရာရှိ၏ "ကယ်တင်ခြင်းတောင်တန်း။ " McDonough ကြောင်းထား၏ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သို့သွားလေ၏ ။ "အစောပိုင်း Pre-ထုတ်လုပ်မှုမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးအမွှာ Otter လေယာဉ်ပျံအတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို ယူ. ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာစတူဒီယိုမှလွှဲပြောင်းခြင်းကိုချင်ပါတယ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ခံစားရရန် Salton ပင်လယ်တဝိုက်အမျိုးမျိုးသောသောကုန်းပြင်မြင့်မှာစက်ဝိုင်းပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ set ကိုသူ့ဟာသူတကယ်အစစ်အမှန်လေယာဉ်ပျံရန်အတိအကျကိုပွဲစဉ်ပညာရှိစကေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကိုတက်ရှိခဲ့သည်တူသောကျနော်တို့လေယာဉ်န်းကျင်ပေါ်ပစ်ချလိုက်တယ်နှင့်ကျွန်တော်လက်ကိုင်ကင်မရာနှင့်အတူမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဖမ်းယူဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်သောကြောင့်ချိန်ခွင်လျှာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားနေခံစားခဲ့ရကြောင်းသိသာအရေးကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်။
"ဒီအစုကိုအပြည့်အဝ-စကေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတည်ဆောက်ရန်နှင့်ယင်း trickier ကင်မရာနေရာချထားမှုကိုအချို့ enable တစ် gimbal ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားကျနော်တို့သူတို့ကိုယ်သူတို့အပေါ်ပြန်ခေါက်နှင့်ကင်မရာကိုငေါထွက်ရန်အဘို့အလိုအပျတဲ့အဖြစ်ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်းပြတင်းပေါက်တဝိုက်ပုဒ်မခဲ့ ငါတို့ကိုလုပ်ကိုင်ရန်အနည်းငယ်ပိုအခန်းထဲမှာပေးပါ။ ကျနော်တို့ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏တင်းကျပ်စွာအလှည့်နှင့်ဘဏ်များန်းကျင်နေရောင်၏လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်တစ်ဦးစီးနင်း-ရိန်းလက်မောင်းပေါ်မှာ T12 ကဆက်ပြောသည်။ "
အများစုကတည်းက Bosch ရဲ့ တည်နေရာပေါ်ရိုက်ကူးသည်အသင်းများထဲမှအထူးအရေးကြီးသောအဖွဲ့ဝင်ပြပွဲအားမိမိပံ့ပိုးမှုများကိုအကြောင်းကိုငါ့အားပြောဆိုသောသူကြီးကြပ်တည်နေရာမန်နေဂျာရှင်ပေါလု Schreiber ဖြစ်ပါသည်။ Schreiber ချီကာဂိုအတွက်တည်နေရာကင်းထောက်အဖြစ်သူ၏စတင်တယ်, ဒါပေမယ့်သူကထားအဖြစ်, "ငါအကျော်လှည့်လည် Los Angeles မြို့ တစ်လ 1994 အတွက်အမှုအရာမှထွက်စစျဆေးဖို့။ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကြော်ငြာ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အင်္ဂါရပ်ကိုအထူးဖြစ်ရပ်များထဲကနေလမ်းညွှန်, "စတာတွေ, ငါ, ရှာစူးစမ်းနှင့်အပေါ်ယံအခွံကို-များအားဖြင့်တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားဇာတ်ညွှန်းနဲ့စိတျဝငျစားဒဏ်ခတ်ကြောင်းသင့်လျော်သောနေရာများတွေ့ရှိရန်ကြိုးစားနေ
Schreiber ကသူ့အလုပ်၏ခြေလှမ်း-by-step ဖြစ်စဉ်ကိုအားဖွငျ့အကြှနျုပျသွားလာ၏။ "ဒါဟာဗေဒပညာရှိ-ရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းမှုလိုအပ်တစ်အောင်သွယ်ပွဲစားကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရဲ့; , ထုတ်လုပ်မှုရဲ့အမှုထမ်း, ပစ္စည်းကရိယာများနှင့်မော်တော်ယာဉ်များများအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခွင့်ပြုလက်တွေ့-ဘတ်ဂျက်တရားစီရငျ; ပထဝီအနေအထား, အသက်အပိုင်းအခြား, ဇုန်သမိုင်း-ဘယ်လိုမြို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနားလည်မှုတစ်ခုအသိပညာ; စီးပွားရေး; စိတ်ပညာ-လာပြီခွင့်ပြုချက်; နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယား၏သိသာထင်ရှားသောထည့်သွင်းစဉ်းစား။ နှင့်ရံဖန်ရံခါတဦးတည်းမှော်နှင့် / သို့မဟုတ်ကံကောင်းခြင်း၏ကျန်းမာထိုးရရှိသည်။
"ငါသည်ပြုပါပထမဦးဆုံးအရာပဲစာရင်းအားလုံးအရာတို့ကိုလျစ်လျူရှုနှင့်ဇာတ်ညွှန်းကိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံစာအုပ်ဖတ်နေကဲ့သို့စကားတော်သည်ငါ့စိတျထဲမှာပုံရိပ်တစ်ခု dictate ။ ထိုအခါတဦးတည်းတဦးတည်းအားဖြင့်ဖျောပွပစ္စည်းများကစားသို့ကန်ကိုစတင်ပါ။ တခါတရံထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာ, ဒါရိုက်တာ, ထုတ်လုပ်သူမကြာခဏကရိုးရိုးတစ်ဦးစတိုင်သို့မဟုတ်ကာလအနည်းငယ်သာအခြားဖျောပွင့်, ဦးတည်ချက်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ငါးရာသီပြီးနောက် Bosch ရဲ့ငါလူတိုင်းအတွက်ကြည့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အလုပ်လုပ်တံ့သောအရာကိုတစ်ဦးတော်တော်လေးဥာဏ်ကောင်းသောရှိသည်။
'' Scout နောက်တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်သော ရွေးချယ်မှုများလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးတိကျတဲ့ရပ်ကွက်ရှာဖွေနေမှ Google Maps ကို, အတိတ်အတွေ့အကြုံများကနေအချို့ကိုအချို့ကိုသုံးပြီးရှာတွေ့နေကြပါတယ်။ စကားဝိုင်း, ညှိနှိုင်းမှု, အဆိုပြုချက်များနှင့်ကံအားလုံးအလားအလာရိုက်ကူးရေးနေရာများတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်မှာထွက်ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်ရမပါဘူးဆိုရင်ဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း, ဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း, ဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း ... ငါဓာတ်ပုံများပြသပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ်ဍာအဘယ်အရာကိုစင်မြင့်မှာကြည့်ရှုမယ့်, သူရွေးချယ်ခြင်းလုပ်နေသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိသည်။ တခါတရံသူကတစ်ခါတစ်ရံလျော့နည်းဒီတော့တစ်ဦးပူးပေါင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ "
သူကတစ်ဦးတည်နေရာအတွက်ကြည့်သောအရာကိုအရည်အသွေးတွေသကဲ့သို့ Schreiber တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တည်နေရာအတွက်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များရှင်းပြသည်။ "ဖြစ်စေတည်နေရာဇာတ်လမ်းနှင့်ဇာတ်ကောင်ထောက်ခံပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းကိုဖတ်ရှုနေစဉ်ငါ့စိတ်ကိုအာကာသလုပ်ထားတဲ့ image ကို fit ပါသလား? စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိ-ရေးစပ်သီပါသလဲ အမြဲတမ်းပုဂ္ဂလဒိဋ္, ကြှနျုပျတို့ကဒီမှာအချိန်မရှိကြပါဘူး။ အန္တရာယ်-they're အဆုံးမဲ့: အအတွင်းတွင်ဖွင့်အရာကိုအာရုံစိုက်ခိုးယူအံ့သောငှါ Visual ပြတ်တောက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ဘောင်။ တစ်ဦးအလားအလာ '' သူရဲကောင်း '' အိမ်သို့တစ်ခုထူးဆန်း-ရှာဖွေနေအိမ်ပြန်လာမယ့်တံခါးကိုရှိတယ်ပါကကြည့်ရှုသူမှစိတ်အာရုံထွေပြားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုဇာတ်ညွှန်းစာမျက်နှာတစ်လျှောက်သယ်ဆောင်ခံရဖို့ချင်တယ်။ ပိုမိုနီးကပ်စွာဒီပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျု့ံတော်မမူကြောင်းဘာမှဆင်းရဲသားရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ Noisemakers-လျှင်မြင်ကွင်းတစ်ခုများအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းတင်, အောက်ပါပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်: ငါတို့သည်ရိုက်ကူးရာမှဆောက်လုပ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များ, junkyards, တိရစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ရေးအဆောက်အဦ, ကျောင်းများ, အသွားအလာ, သို့မဟုတ် Banana Republic စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စတိုးဆိုင်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပုံကားမောင်းသူလာမယ့်တံခါးကိုအနီးတဝိုက်ရှိစေသောအရာ ထွက် holler မှညွှန်ကြားရေးမှူး Rob Reiner, 'ငရဲဆိုတာဘာဖြစ်ခဲ့သည် ?!' ' ပျော်စရာအချိန်လေးသေချာပါစေရန်။ ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရှိပါတယ်။ တည်နေရာရိုက်ကူးရေးအမှန်တကယ်ကမ္ဘာတွင်မ soundstage ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးရေးများအတွက်အာကာသထိန်းချုပ်ဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှီခို။ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူအိမ်ခြံမြေသိမ်းပိုက်ဖို့ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ခြေရာကိုအဘို့အခွင့်ပြုချက်ရယူခံထားဖြစ်နှင့်ကြိမ်မှာမဖြစ်နိုင်ပါနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခု option ကိုသို့အချိန်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမပြုမီ, ငါအောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကောက်ချက်ချ။ "
သူဟာတည်နေရာအလုပျအတှကျရှေးခယျြထားရဲ့အမျိုးမျိုးသောနေရာများခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်မဆိုအထူးသဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါ Schreiber မေးတယ်။ "Nope" ဟုသူကတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ "ကျွန်မနေတဲ့ပုံစံတင်ပို့ရန်ဝန်ကြီးအဖွဲ့နဲ့တူဖိုင်များစုစည်း; Sub-ဖိုလ်ဒါတစည်းနှင့်အတူဖိုလ်ဒါ။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲပထဝီနှင့်အတူတော်တော်လေးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်တစ်ခုခုသည်အဘယ်မှာရှိငါများသောအားဖြင့်တော်တော်ကောင်းကောင်းသတိရပါ။ ငါပိုကောင်းတဲ့သော့ချက်စကားလုံးရှာဖွေမှုများကိုငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်သော်လည်း, ငါအချိန်မရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ Google Maps ကိုအများအပြားပြတင်းပေါက်မဆိုပေးထားသောအချိန်မှာများသောအားဖြင့်ငါ၏အ Desktop ပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ကြသည်။ ဓာတ်ပုံများ-မကြာခဏ 500 ပုံရိပ်တွေ၏ zillions များအတွက်ရိုးရှင်းသောသုတ်-အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲ app ကိုတစ်ဦး, ငါ့ကင်မရာကတဆင့်နေ့က-run ။ ဓာတ်ပုံအလှဆင်ခြင်းကိုပိုပြီးပျံ့နှံ့ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ကျွန်တော်ဝေးနေရတဲ့နေ။ အိုးကောင်းသောကြည့်ရှုနေစဉ်, အလွန်အချိန်စားသုံးပါတယ်။ အခြိနျမှနျမှလယ်ပြင်တွင်, ငါသည်ငါ့ Sun က Path ကို AP ဆွဲထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ "
အမေဇုံချုပ်ဗီဒီယို AMPAS ASC Bosch ရဲ့ BSc ဆှေမြိုး Downton Abbey အဆိုပါလမ်းလျှောက်သေကိုကွောကျရှံ့ အပူ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော LUTs မိုက်ကယ် Connelly အနီရောငျ SoftAtHome, MStar, CES2017 Sony က လှံ & Arrows ပြင်သစ်ကော်နက်ရှင် တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဖြစ်တဲ့ Warner Brothers	2019-06-07
ယခင်: Chesapeake စနစ်များအနောက်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့သို့မေီ Lounsbury ထည့်ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: ကွန်ပျူတာ Vision ၏ & Visual Effects Core အင်ဂျင်နီယာချုပ်